Ittefaq (2017) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Not Rated 2017 105 min Mystery, Thriller
အိန်ဒိယနိုငျငံမှနျဘိုငျးမွို့မှာ မိုးတှသေညျးနပေါတယျ…မိုးရထေဲမှာပဲ ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ လူသတျမှုနှဈခု…ဗဈကရမျစီသီးဟာ ယူကနေိုငျငံမှာ လူကွိုကျမြားတဲ့ ဝတ်ထုရေးဆရာတဈယောကျပါ…သူဟာ ကတျသရငျးဆိုတဲ့ foreigner အမြိုးသမီးနဲ့ အိမျထောငျတဈခုတညျထောငျခဲ့ပါတယျ…
တဈနေ့ သူပွနျလာတဲ့အခြိနျမှာတော့ ကတျသရငျး သဆေုံးနခေဲ့ပါတယျ…ခကျြခငျြးပဲ သူရဲကိုဖုနျးဆကျတယျ…ရဲတှကေ သူသတျတယျဆိုပွီး ခွိမျးခွောကျပါတယျ…ဗဈကရမျဟာ ကွောကျကွောကျလနျ့လနျ့နဲ့ ခွဦေးတညျ့ရာကားမောငျးပွေးပါတော့တယျ….ကားအရှိနျလှနျပွီး တိမျးမှောကျခဲ့ပါတယျ…ဒဏျရာတှနေဲ့ ဗဈကရမျဟာ နီးစပျရာ အိမျထဲဝငျပွီး အိမျပိုငျရှငျ မာယာဆိုတဲ့အမြိုးသမီးကို အကူအညီတောငျးခဲ့ပါတယျ…ဒီကူညီပေးတဲ့အိမျမှာလဲ လူသတျမှုဖွဈနခေဲ့ပါတယျ…မာယာခငျပှနျးဖွဈသူ ရှကျကာ ဆိုတဲ့ သူသဆေုံးနတောပါ…ဗဈကရမျအမှုကို မှနျဘိုငျးထိပျတနျးစုံထောကျ ဒဗျေ့ တာဝနျယူရပါတယျ…ဒဗျေ့ဟာ မာယာနဲ့ ဗဈကရမျရဲ့ ထှကျဆိုခကျြမြားကို နားထောငျရပါတယျ….
အိန္ဒိယနိုင်ငံမွန်ဘိုင်းမြို့မှာ မိုးတွေသည်းနေပါတယ်…မိုးရေထဲမှာပဲ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူသတ်မှုနှစ်ခု…ဗစ်ကရမ်စီသီးဟာ ယူကေနိုင်ငံမှာ လူကြိုက်များတဲ့ ဝတ္ထုရေးဆရာတစ်ယောက်ပါ…သူဟာ ကတ်သရင်းဆိုတဲ့ foreigner အမျိုးသမီးနဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်…
တစ်နေ့ သူပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ ကတ်သရင်း သေဆုံးနေခဲ့ပါတယ်…ချက်ချင်းပဲ သူရဲကိုဖုန်းဆက်တယ်…ရဲတွေက သူသတ်တယ်ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်ပါတယ်…ဗစ်ကရမ်ဟာ ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ ခြေဦးတည့်ရာကားမောင်းပြေးပါတော့တယ်….ကားအရှိန်လွန်ပြီး တိမ်းမှောက်ခဲ့ပါတယ်…ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ဗစ်ကရမ်ဟာ နီးစပ်ရာ အိမ်ထဲဝင်ပြီး အိမ်ပိုင်ရှင် မာယာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကို အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်…ဒီကူညီပေးတဲ့အိမ်မှာလဲ လူသတ်မှုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်…မာယာခင်ပွန်းဖြစ်သူ ရှက်ကာ ဆိုတဲ့ သူသေဆုံးနေတာပါ…ဗစ်ကရမ်အမှုကို မွန်ဘိုင်းထိပ်တန်းစုံထောက် ဒေ့ဗ် တာဝန်ယူရပါတယ်…ဒေ့ဗ်ဟာ မာယာနဲ့ ဗစ်ကရမ်ရဲ့ ထွက်ဆိုချက်များကို နားထောင်ရပါတယ်….
Akshaye Khanna Mandira Bedi Sidharth Malhotra Sonakshi Sinha
Option3sharer.pw 494 MB SD (480p)
Option4yuudrive.me 494 MB SD (480p)
Option9storage.msubmovie.com 2.3 GB FHD (1080p) EAC-3 5.1
Option 10 server.mfile.cloud 2.3 GB FHD (1080p) EAC-3 5.1
Option 11 sharer.pw 2.3 GB FHD (1080p) EAC-3 5.1
Option 12 yuudrive.me 2.3 GB FHD (1080p) EAC-3 5.1